၊ ဇာတိ ၏သုည နယ်ကိုသိလျှင် | မူလဓမ္မ ဆရာတော် ဦးဝိဇယ
March 3, 2010	ဓမ္မဓရ === တရားနာရတာကတော့ ကြေးဖလားကြီး ပွတ်ရင် ၊ ပွတ်လေ ဝင်းလေ ဖြစ်သလို ၊ အထင် အမျိုး မျိုး နှင့် ညစ်ပေနေသော စိတ်ကို တရား အမြင်ဖြင့်ပွတ်လိုက်သော အခါ စိတ်တွေဟာ ပိုပိုပြီး ကြည်လင်အေးချမ်းလာပါတယ်။
တပည့်တော် နှစ်ပေါင်းများစွာ ရှာခဲ့သော ဘဝ ရဲ. အဓိပ္ပါယ်ကို လည်းကောင်း ၊ အဓိပ္ပါယ် ရှိသော ဘဝ ဖြစ်ဘို့ ပုံစံ အမျိုးမျိုး ချပြီး ပြုလုပ်ခဲ့တာတွေ ကို လည်းကောင်း၊ ဤ တစ်ထိုင် တရားနာလိုက်တာ နဲ့ ဘဲ နှစ်ခုလုံး ပြည့်စုံသွားသလို ခံစားရပါတယ်။ သုည ဖြစ်နေသော ဘဝ ကို သုည အတိုင်းသိပြီး အေးအေးဆေးဆေး နေနိုင်ခြင်း သည် ဘဝရဲ. အဓိပ္ပါယ် ဖြစ်သ လို အဓိပ္ပါယ် ရှိသော ဘဝ လည်း ဖြစ်လာပါတယ်ဘုရား။ ဆက်ပြီး ဟော ကြားတော်မူ ပါ ဘုရား။
ဦးဝိဇယ=== ဇာတိရဲ. အဓိပ္ပါယ် ကို ဆက်ပြောပြပါ့မယ်။ ဇာတိဟူသော စကားကိုကြား သိ သော အခါ ( မသိခြင်း ) အထင် ၊ ( ဆိုးခြင်း ) အထင် ၊ (ကောင်းခြင်း) အထင်များ စိတ်မှာ ပေါ်နေတတ်ပါတယ်။ ဤ အထင်နယ်ကို အဝိဇ္ဇမာနပညတ်နယ် -လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဤ နယ်ဟာ အလွန်ကျယ်ဝန်းပါတယ်။ မြေကြီးကိုလက် ညှိုး ညွှန်ရာလောက် ကိုပင် မသိဘဲ ၊ မြေကြီး အားလုံး ကို သိရသကဲ့သို့ ၊ ထို့အတူ ၊ အထင် ( ၃) မျိုး ကို ညွှန်လိုက်သော်လည်း စကားလုံးတိုင်းမှာ ရှိတဲ့ အထင်အားလုံး ကို သဘောပေါက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အထင်တွေ ဘယ် လောက်များတယ်ဆိုတာ ၊ အချိန်ရှိတိုင်း ၊ အထင်တွေနဲ့ နေတာကိုသဘောပေါက် ပါ ဘုရား။
ထို အထင်တွေကို အဟုတ်ထင်ပြီး ခန္ဓာ မျိုးစုံ ရကာ ဒုက္ခမျိုးစုံ ကြုံတွေ့ခဲ့ ရပါတယ်။ အထင်တွေကို အဟုတ်ထင်သော အဝိဇ္ဇာ ကိုပယ် နိုင်တဲ့ ဘဝရောက်ခိုက် မပယ် ထား ရင် သံသရာ ကြီးဟာ အလွန်ရှည် ဦးမယ် ဆိုတာလည်းသဘောပေါက်ပါဘုရား။
ဘဝ တစ်ခု ရဲ. နောက်ဆုံးစိတ်ကို စုတိစိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ တဖန် ဘဝ သစ်မှာ ၊ အစဆုံး ဖြစ်သော စိတ်ကို ပဋိသန္ဓေစိတ် ဟုခေါ်ပါတယ်။ စုတိစိတ်ထိဖြစ်စဉ်ကို ( ဘဝ ) လို့ခေါ်ပါ တယ်။ ဘဝသစ်၏ အစဆုံး စိတ်ဖြစ်သော၊ ပဋိသန္ဓေစိတ်ကို ဇာတိလို့ခေါ်ပါတယ်။ စိတ်အစဉ် တစ်ခုကို ကုဋေ တစ်သိန်းစိတ်လိုက်လျှင် ၊ ထို အစိတ်ထဲမှ အစိတ်တစ်ခု ဖြစ်ပျက်သဘောလေးဟာ ( ဇာတိ ) အစစ်ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုဇာတိ၏ နောက်ဖြစ်သော ဘဝင် အစဉ်တွေကတော့ ဝိပါတ်အစဉ်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တာတွေကတော့ ထိုဘဝ ၏ စုတိအထိ ၊ ( ဘဝ ) ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဝ နှင့်ဇာတိ ထူးခြားမှုကိုပြောတာပါဘုရား။
ဘဝပစ္စယာ ဇာတိအရ ၊ ဘဝကြောင့် ဇာတိဖြစ်တယ်၊ ဘဝ မရှိဘဲ ဇာတိမရှိနိုင်ဘူး။ ဘဝ အဆုံး ကို ကြည့်ပြီးသေရင် ဘဝချုပ်လို့ ၊ ဇာတိလည်းချုပ်ပြီး ပရိနိဗ္ဗာန် ပြုကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ဇာတိသည် ကိုယ် ပိုင် အနှစ်အသားလုံးဝ မရှိပါဘူး၊ မူလပျက်သဘောသာ ဖြစ်ပါတယ်။ သုည နယ် လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဇာတိ၏ သုညနယ်ကို သိလျှင် ၊ ဇာတိဟူသောစကားကို မှီပြီး ဖြစ်သော အထင်အားလုံး ငြိမ်းသွားပါတယ်ဘုရား။
« ဇရာ၊ မရဏ ကို နယ်လေးပါး ဖြင့်ပိုင်းခြားသိပုံ
ဘဝကို နယ် လေးပါးနှင့်ပိုင်းခြားခြင်း »